Real Madrid iyo FC Porto oo u soo baxday wareega 8-da ee Champions League (Sawirro)
Sagal Radio Services • News Report • March 11, 2015
Kooxda Real Madrid ayaa si nasiib leh waxay ugu soo baxday wareega 8-da ee Champions League, iyadoo kulankii xalay ka dhacay Bernabue Stadium ay kooxda Schalke 04 ay ku badisay 4-3, inkastoo Real Madrid ay wadarta guud ku soo baxday 5-4.
Real Madrid oo guulaheeda sii wadata iyo Ronaldo oo goolashiisa sii wata
Sagal Radio Services • News Report • October 19, 2014
Kooxda Real Madrid ayaa wali ku socota wadadeeda guusha, inkasta oo ay tallaab u soo qaatay dhanka hogaanka Horyaalka Spain, balse wali waxaa ka sareysa Barcelona.
Real Madrid oo garoonkeeda lagu garaacay iyo Neymar oo Fc Barcelona ka farxiyay (Faaqidaada Horyaalka La Liga)
Sagal Radio Services • News Report • September 14, 2014
Horyaalka dalka Spain ee La Liga oo la ciyaaray kulankiisii 3-aad ayaa waxaa garoonkeeda qaaska ah ee Santiago Bernabeu lagu soo garaacay kooxda Real Madrid. Waa guuldaradii labaad oo xiriir ah oo dusha loo saaro kooxda Los Blancos Real Madrid.
Cristiano Ronaldo oo farta ka saaray kooxda Real Madrid koobka UEFA-Super Cup 2014 (Daawo Muuqaal+Sawiro )
Sagal Radio Services • Audio/News Report • August 13, 2014
Xiddiga Qaranka Portugal Cristiano Ronaldo ayaa kooxda Los Blancos Real Madrid wuxuu u suurto galiyay inay qaadaan koobka UEFA Super Cup 2014 oo ciyaartiisii fiinaalka eheed lagu qabtay magaalada Cardiff ee dalka Wales.